Part 1: Gịnị bụ a M2TS faịlụ?
Part 2: Olee otú Play M2TS Files na a VLC Media Player on Windows?
Part 3: Olee Play M2TS Files na a VLC Media Player on Mac?
Part 4: Gịnị mere VLC apụghị egwu ụfọdụ M2TS faịlụ?
Part 5: Wondershare Video Converter Ultimate bụ a kasị mma VLC nnyemaaka
M2TS faịlụ bụ ndị na-eji maka Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV). M2TS, nke anọchi MPEG -2 Transport Stream na-ndị eji maka nzube nke multiplexing nke dị iche iche Video, Audio na ndị ọzọ na ndị dị otú ahụ iyi. Ndị a na-tumadi eji maka High definition video maka Blu Ray na Advanced Video nzuzo High Definition.
Ndị a bụ faịlụ extensions eji maka nzọpụta nke faịlụ na elu-definition, na-eji BDAV (Blu-ray Disc Audio / Anya) usoro. M2TS faịlụ akwado ma 720p na 1080i formats nke faịlụ. Aha na ihe nlereanya nke M2TS File nwere ike ịbụ na ụdị "xxxxx.m2ts", ebe "xxxxx" bụ a 5-ọbula nọmba, nke kwekọrọ na audiovisual clip. Nke a faịlụ ndọtị e mepụtara site Blu-ray Disc Association na bụ akpa maka Audio, video na data faịlụ.
VLC Players nwere ike igwu M2TS faịlụ na ma Mac na Windows. VLC Media Player nwere ike igwu azụ ọdịnaya H.264 video na AC3 audio ie M2TS faịlụ ozugbo enweghị ihe ọ bụla nkwado nke ọ bụla mpụga na-akpata. Na-egwu M2TS faịlụ na Windows, niile ị chọrọ bụ na-emeghe VLC Player, pịa na menu nhọrọ, na-aga na-emeghe faịlụ nhọrọ. Mgbe ahụ, ị na-achọrọ Iji chọgharịa button na ịnyagharịa ebe M2TS faịlụ na-echekwara na kọmputa gị. Họrọ faịlụ, nke ị chọrọ igwu na pịa OK na VLC ga-amalite na-akpọ M2TS video ị họọrọ.
Ọtụtụ n'ime ndị faịlụ ugbu ke M2TS Files pụrụ n'ụzọ dị mfe na-egwuri site VLC Media Player on Windows.
Nkebi nke 3: Olee otú iji Play M2TS Files na a VLC Media Player on Mac?
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na Mac na chọrọ igwu gị M2TS Files n'elu ikpo okwu, na nhọrọ dị, na nhọrọ bụ otu ihe ahụ dị na na Windows. Mkpa ka ị Right pịa Media, Open Njikwa, Chọta nke .mts faịlụ ma ọ bụ M2TS File na Pịa OK na-egwu egwu na VLC Player. Na-egwuri egwu M2TS Files na Windows na Mac, dokwara mfe na doro anya obibia nke VLC Media Player kwupụta na-agba ọsọ ndị a faịlụ, usoro bụ nnọọ mfe ma e wezụga na ụfọdụ, ebe ụfọdụ M2TS Files apụghị-egwuri ruru ụfọdụ akpan akpan mbipụta.
Nkebi nke 4: Gịnị VLC apụghị egwu ụfọdụ M2TS faịlụ?
Ọtụtụ n'ime ndị M2TS Files ike ngwa ngwa na-egwuri na VLC Player, ma ka ụfọdụ n'ime M2TS Files bụ n'ebe ahụ, nke VLC apụghị egwu. Ụfọdụ n'ime ihe ndị dị otú ahụ njehie nwere ike ịbụ na ụdị nke "Blu-Ray njehie: Nke a Blu-Ray diski kwesịrị a ọbá akwụkwọ AACS nyopụta, na gị usoro adịghị nwere ya", nke na-egosi na enweghi nke Library maka AACS nyopụta dị oké mkpa maka usoro na-egwu M2TS Files.
Ọbụna, cheta na M2TS faịlụ na-elu definition faịlụ, nke kwesịrị ezi ndịna-emeputa na mma Ram maka faịlụ na-egwuri. N'ihi ya, na ikpe, ị na-enwe mmetụta ike na-agba ọsọ M2TS Files, dị nnọọ ego na nhazi nke System kwa, dị ka ndị a nwere ike ịbụ ndị ọzọ ihe mere ndị VLC Player bụghị na-agba ọsọ ụfọdụ M2TC Files. Enweghị nke kwesịrị ekwesị codec mkpa na-egwu otu faịlụ, pụrụ ịbụ nnọọ na ihe ndị ọzọ maka VLC Player bụghị na-agba ọsọ ụfọdụ M2TS Files.
Ọ bụrụ na, VLC Player apụghị egwu ụfọdụ M2TS Files, otu ngwa 'Wondershare Video Converter Ultimate; nwere ike ịbụ ihe kasị mma VLC nnyemaaka maka otu. The Wondershare Video Converter Ultimate bụ otu dị ike na ebube ngwa, nke na-eje ozi dị ka ndị kasị mma akakabarede ikpo okwu maka ụdị nile nke video extensions. The faịlụ nwere ndọtị M2TS nwere ike mfe converted-eji nke a software na mgbe ahụ nwere ike mfe eji maka nzube nke na-akpọ na ihe ọ bụla ọkpụkpọ dị ka VLC Player.
Iji na-egwu M2TS faịlụ na Mac na Windows, nke na-adịghị agba ọsọ na VLC Player, ha nwere ike mfe converted enweghị ihe ọ bụla mgbalị iji Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ atọghata iche iche nke faịlụ ndọtị si otu ụdị ndị ọzọ na ike ga-eji maka ụdị nile nke mkpa.
Dị nnọọ eso screenshots maka otu ma na-gị faịlụ converted.
The screenshots n'okpuru na-egosi usoro bụ nnọọ mfe ma na-achọ fọrọ nke nta mgbalị ọ bụla na ọ dịghị clicks maka akakabarede usoro-ewere ọnọdụ.
Iji tọghata M2TS faịlụ ka ọ bụla ọzọ ụdị, niile ị chọrọ bụ pịa M2TS Ntụgharị ngalaba nke Wondershare na-aga "tọghata" taabụ.
Wee pịa "Tinye Files" menu ịgbakwunye gị Obodo M2TS faịlụ ka ngwa a.
Mgbe ahụ na-ahọrọ nri usoro nke mmepụta, nke ị chọrọ, na site ọkụkụ "tọghata" button ugbu a na ala n'aka nri akuku nke a M2TS Video Ntụgharị si interface, usoro nke akakabarede Nwela dechara.
Mgbe akakabarede usoro bụ nnọọ mfe, anyị nwekwara ike-achọpụta ụfọdụ n'ime ndị isi eziokwu ndị metụtara ya na ngwá ọrụ a nwere ike tọghata AVCHD M2TS faịlụ site ọ bụla si iji video na AVI, MKV, WMV, MP4, FLV, 3GP / 3G2, MOV, MTS, na VOB na ọtụtụ ndị ọzọ.
> Resource> VLC> Olee otú iji Play M2TS Files na a VLC Media Player?